ထမင်းအိုး: ကျွန်မရဲ့ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံ ကမ်းကုန် ကမ်းကုန်..................
ကျွန်မရဲ့ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံ ကမ်းကုန် ကမ်းကုန်..................
အိမ်ထောင်သည် ဘ၀ အစအဖြစ်အပျက်များ
အိမ်ထောင်သက် ၃ လအတွင်း ထမင်းပေါင်းအိုး ၃ လုံးဝယ်ရလို့ပါ။(ပထမ တလုံး နှစ်လနဲ့ပျက်၊ ဒုတိယတလုံး ၁၀ ရက်နဲ့ပျက်၊ တတိယတလုံး လျက်ရှိချက်လို့ရနေဆဲပါ။
လက်ရှိထမင်းပေါင်းအိုး (ဓာတ်ပုံတော့ အင်တက်နက်က ယူပြီး ပြန်ပြင်ထားတာပါ။)
ပထမတအိုး မီးတော့လင်းတယ်။ ရေက မဆူလာတော့ဘူး။ ဒါပေမယ့် ပြောအားတော့ရှိပါတယ်။ ထမင်းပေါင်းအိုးထက်စာရင် ရေနွေးအိုးက ပိုကြာမှ ပျက်တာပါလို။ ပထမရေနွေးအိုးက ၄ လကျော်အထိခံပါ တယ်။ ဒုတိယတအိုး လက်ရှိဆူနေဆဲ။
လက်ရှိရေနွေးအိုး (ဓာတ်ပုံတော့ အင်တက်နက်က ယူပြီး ပြန်ပြင်ထားတာပါ။)
၃။ လျှပ်စစ်ဘုတ်ခုံ(Extension Socket4way)
မီးကြွေထိုးနေရင်း(မီးပူတိုက်နေရင်း) ဖောင်း၊ဘောင်း ဆိုပြီး အသံထွက်လာသည်။ ဒီလိုလေး မီးကြွေလေးထိုးနေရင်းက လျှပ်စစ်ဘုတ်ခုံလေး ပျက်သွားသည်။ နောက်ထပ်အသစ် သုံးလို့ရနေဆဲ။
(မှတ်ချက်။ ။ ကိုယ်တော်က ပြောတယ် မိန်းမနဲ့ လျှပ်စစ်ပစ်စည်းနဲ့ မတည့်ဘူးတဲ့။)
ငရုတ်ဆုံကိုရေဆေးရင် ထုံးစံအတိုင်း မှောက်လိုက်သည်။ ငရုတ်ကျည်ပွေ့လဲ အမှုမဲ့ အမှတ်မဲ့ ဒီအတိုင်းတင်လိုက်မိသည်။ လိမ့်ကျပြီး ကျိုးပါလေရော။ နောက်ထပ် ငရုတ်ကျည်ပွေ့အသစ် မကျိုးသေးပါ။ (ဒီမှာ ငရုတ်ကျည်ပွေ့ကြီးပဲ သတ်သတ်ဝယ်ရတာ ခက်လိုက်တာ။ ခွဲပြီးမရောင်းချင်ကြဘူး။ ငရုတ်ဆုံတစုံလုံးဝယ်တုံးက S$ 12 ပေးရတယ်။ ငရုတ်ကျည်ပွေ့တခုတည်းဝယ်တော့ S$6ပေးခဲ့ရတယ်။ ဒါတောင် မနည်းရှာပြီးဝယ်ခဲ့ရတာ။ ဒီလိုဆိုတော့ ကိုယ်တော်က ပြောသေးတယ် လျှပ်စစ်ပစ်စည်းမဟုတ်လဲ မတည့်ဘူးတဲ့။ ကျိုးသေးတာပဲလားတဲ့။ ဟဲဟဲ တမင်တကာလုပ်တာမှ မဟုတ်တာ သတ်နိုင်ဘူးလေ။ နော်)
လက်ရှိ ငရုတ်ဆုံ (ငရုတ်ကျည်ပွေ့အသစ်နဲ့ပေါ့)
Posted by မိုးကောင်းသူ at 10:27 PM
ဒီဘလော့လေးရဲ့နာမည်ကို ထမင်းအိုးဆိုပြီး နာမည်ပေးရတဲ့ အဓိကရည်ရွယ်ချက်ကတော့ အိမ်ထောင်သက် ၃ လအတွင်း ထမင်းပေါင်းအိုး ၃ လုံးဝယ်ရလို့ပါ။(ပထမ တလုံး နှစ်လနဲ့ပျက်၊ ဒုတိယတလုံး ၁၀ ရက်နဲ့ပျက်၊ တတိယတလုံး လက်ရှိချက်လို့ရနေဆဲပါ။)မှတ်မှတ်ရရပေါ့။ ပြီးတော့ ကိုယ်ချက်တဲ့ နေ့စဉ်ဟင်းလေးတွေကို ချက်နည်းရေးထားတာပါ။ အမှားပါရင်လည်း ခွင့်လွတ်ပေးကြပါနော်။
ထမင်းအိုး ရဲ. မန့်မန့်လေးတွေ
ယိုးဒယားသို့ ခရီးသွားမှတ်တမ်း နဲ့ အစားအစာများ
အမှတ်တရ ကိန်း ဂဏန်းစဉ်
လက်ဖက်နေ့ရက်များ ကျွန်မရဲ့ လက်ဖက်နှပ် လက်ဖက်နဲ့တွင်းပိုး လက်ဖက်နဲ့ငါးပေါက်သီးဆံရှယ် လက်ဖက်နဲ့ငါးပေါက်သီးဆံ လက်ဖက်နဲ့ငါးပေါက်သီးဆံသုပ် လက်ဖက်နဲ့ပြောင်းပူး လက်ဖက်နဲ့ပဲရေပွ လက်ဖက်သုပ် နဲ့ သစ်တော်သီးသုပ် လက်ဖက်နဲ့တောင်ကြီးပဲကြော် လက်ဖက်နဲ့စာကလေးချေးကြော် လက်ဖက်ရိုးရိုး လက်ဖက်ချဉ်စပ်
ဂဏန်းဟင်းခရုချက် နဲ့ ဂဏန်းချက်ဂဏန်းချက် နဲ့ တခြားဟင်းလျှာများဂဏန်းချက်စားခြင်း
မိုးကောင်းအစားအစာလေးများရှမ်းသုပ်(ခေါ်) သင်္ဘောသီးသုပ်ရှမ်းခေါက်ဆွဲများမျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲကြက်သားကချင်ချက် ဟင်းအင့် (ခေါ်) ဟင်းလှော်တိုးပူးသုပ် ကိုက်လန်ပေါင်း(သို့)မုန့်ညှင်းပေါင်း မုန့်ညှင်းပေါင်းနှင်းမှိုပေါင်းငါးပေါက်သီးဆံထောင်းဆန်ဆီးရှမ်းခေါက်ဆွဲ ကြက်အုံး ကြက်ပေါင်းထုပ် ငါးအုံး ငါးပေါင်းထုပ် ပုဇွန်အုံး ပုဇွန်ပေါင်းထုပ်
ယောနယ်အစားအစာများ မျှစ်ပလောဟင်းရည် မျှစ်ဆူးထိုးချက် ပုတတ်ကြော် သဘောင်္သီး ကမောင်းကြော်
ဒီလိုလေးတွေလုပ်စားရအောင်မျှစ်ချဉ်ခေါက်ဆွဲဆန်ဆီးရှမ်းခေါက်ဆွဲရှမ်းခေါက်ဆွဲရေစိမ်ခေါက်ဆွဲတိုပူးနွေးမြေအိုးမြီးရှည်ကြာဆံဟင်းခါး ကြေးအိုးဆီကျက်နှင့်ကြေးအိုးအာပူလျှာပူအုန်းနို့ခေါက်ဆွဲSpaghetti (စပါကတီ)စမူဆာ ပဲရည်သုပ်ဆိတ်ရိုးပဲဟင်းနဲ့ချပါတီဆိတ်သားနဲ့အာလူး ပလာတာဖက်ထုပ် (ကြော်၊ပေါင်း၊ပြုတ်)လမ်းသရဲမုန့်မုန့်ရေပါးဆီထမင်းနှင့်အကြော်စုံဆီထမင်းမန္တလေးပဲကြော်တိုပူးကြော်ကုလားဘယာကြော်ကောက်ညင်းပေါင်းနှင့်အကြော်စဆန်ကြာဇံကြော် ချဉ်စပ်ထမင်းကြော် ခေါပုတ်ကြော် ဒန်ပေါက် ပဲထမင်း မာလာငါးဟင်း ပြောင်းဖူး ထမင်းသုပ် ထမင်းသုပ် မာလာဟင်းသုပ် တိုးပူးသုပ် ၀က်သား ဒုတ်ထိုး
အသုပ်လေးများ ကြက်သားသုပ် ရခိုင် သင်္ဘောသီးသုပ် မယ်ဇလီဖူးသုပ် မန္တလေး မုန်လာချဉ်သုပ် မုန်လာဥနီသုပ် ဆလပ်ရွက်သုပ်အသုပ်စုံ ဗမာ မုန့်ညှင်းချဉ်သုပ် ခရမ်းချဉ်သီးအစိမ်းသုပ် ပဲတောင့်ရှည်သုပ် ခရမ်းသီးမီးဖုတ်သုပ် ပဲတီချဉ်သုပ် သရက်သီးသုပ် မရမ်းသီးသုပ် ယိုးဒယား ပဲကြာဇံသုပ် လက်ဖက်သုပ် ပုံးရည်ကြီးသုပ် ပုံးရည်ကြီးထမင်းသုပ် ပြောင်းဖူး ထမင်းသုပ် ထမင်းသုပ် ကြက်ဥခေါက်ဆွဲသုပ် မာလာဟင်းသုပ် တိုးပူးသုပ် စမူဆာ ပဲရည်သုပ်
အထုအထောင်းလေးများ ငါးပေါက်သီးဆံထောင်း မန်ကျည်းသီးစိမ်းထောင်း ချဉ်ပေါင်သီးထောင်း သရက်သီးထောင်း ခရမ်းချဉ်သီးပန်ထရွေဖျော်ထောင်း ငါးပိထောင်း ပဲပုပ်ထောင်း ငရုတ်သီးထောင်း ငပူသီးထောင်း
ယနေ့ ချက်စားဖြစ်သော ညနေစာဟင်းလျာများ
လမ်းသရဲမုန့် (သို့) မုန့်ရေပါး................
ကျွန်မရဲ့ဖြစ်ပုံ ဖြစ်ပုံ ကမ်းကုန် ကမ်းကုန်...........
ဒီမှာလဲ ဖတ်စရာ ရှယ်လေးတွေ
Singapore style fried carrot cake (Chai Tow Kway) - လိုအပျသော ပစ်စညျးမြား Steam carrot cake အတှကျ မုံလာဥဖွူ (radish) - 500 gm ( အခှံခှါပွီး သင်ျဘောခွဈနဲ့ ခွဈထားပါ) ကွကျပွုတျရညျ (chicken stock) - 500 ml ဆနျ...
Food Review: ပုရစ်ကြော် - ပုရဈကွျောကွိုကျတဲ့မောငျလေးကိုကို မမ ညီမမြားအတှကျပါ။ မနှဈက ရှနှေငျးဆီညီမလေးဆီက တဈခါမှာဖူးတယျ။ ပို့ရတာဝေးတဲ့အတှကျ ကိုယျ့ဆီရောကျလာတော့ မှိုတှေတကျပွီးစ...
Blog အလှမျးပွေ - မဝငျတာကွာတဲ့ ကိုယျ့ရဲ့blogလေးက ကိုယျ့ကို သစ်စာရှိစှာစောငျ့မြှျောပေးနလေို့ အားနာကြေးဇူးတငျရပါတယျ ပုံလေးကတော့ လကျဆောငျပေါ့နျော 😄😄😄 Mask တပျကွပါလို့ ...
အသံတိတ်ထားတဲ့ အလွမ်းများ - ဒီနေ့ သမီးလေးက မေးခွန်းတစ်ခုမေးလာတယ်.. မေမေနေမကောင်းဖြစ်ရင် မေမေ့ မာမီကို လွမ်းလားဟင်တဲ့။ အရင်တုန်းကလဲ မေမေ့အမေကို သတိရလား။ သူကရော မေမေ့ကိုချစ်လားဆိုတာမျိ...
ပုစွန်ဘော့ချိတ်ကြော် - လှော်ထားတဲ့ပုစွန်လေး ထောင်းထားတဲ့ ငရုတ်သီးကြက်သွန်ဖြူနီဆီသတ် ဆီသတ်နံ့မွှေးလာပြီ့့့  လှော်ထားတဲ့ပုစွန်လေးတွေ ထည့်မွှေ့့့  စားလို့ရပါပြီ့့့  ချစ်သောေ...
My Favorite Place in Little Pigeonhole
Another Milestone in 2018? Stay tune... - မုန့်လုပ်နည်းများ ၂ ပြီးတော့.........မကြာမီလာမည်...:)
Untitled - 🎼ရာသီတွေ ဟောင်းတိုင်း ပြန်ရခဲ့တဲ့ နွေဦးလေနဲ့ မင်းလေးရဲ့ အိပ်မက် တခါပြန်ပြီး လှမယ့် ဒီအချိန်တွေကို ကိုယ်မျှော်လင့်တယါ 🎼
အပြောင်းအလဲ - ကျမ ဂျာမနီရောက်နေတာအနှစ် ၂၀ခန့် ရှိပါပြီ။ ဘာလိုလိုနဲ့ဂျာမနီက ကျမအတွက် ဒုတိယ အိမ်ဆိုလည်း မမှာပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ ကျမ အတွက် အပြောင်းအလည်း လိုအပ်လာပြီ။ အဝေးကနေ လ...
သူရဲကောင်း - မောင်စိန်ဝင်း(ပုတီးကုန်း) - ကျောင်းမှာကထည်းကသူငယ်ချင်းသို့..... သူရဲကောင်း ......,,,,,, ပန်းလိုကြွေလည်း ဝေတုန်းအတိုင်းသင်းနေတယ်... ကြယ်လိုကြွေလည်း နေတုန်းအတိုင်း လင်းနေတယ်... ပန်းလို...
Vista's Colorful Planet
ဘလော့ ဖုန်ခါ ပိုစ့် - ပို့ စ်တောင် မတင်တတ်တော့ဘူး ..😅
april 2018 - ဟို တုံးကလို ဘယ် သူ့ မျက် နှာ မှ မကြည့် ဘဲ စိတ ကူး ပေါက် ရာ သွာ ချင် စိတ် လေး တွေ ပေါ် လာ တာယ် 24 hour duty အထွက်ို တ့ ပက် ပန်ူး တာ တေ့ လဲ အမှန် အိမ်ြ...
- သား တဲ့.... ကလေးတွေကို ချစ်တတ်တဲ့ ကိုယ့်အဖို့ သားကိုချစ်တာတော့ ဆိုဖွယ်ရာမရှိပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သားကိုအချစ်လွန်နေတာလား ကိုယ့်ဘာသာ ချစ်နေတာလားမသိ.... သား ဖျားမှာ ...
MUA Web Converter - ယူနီကုတျနဲ့ရေးထားတဲ့ ဝကျဆိုကျတှေ စတေးတတျတှေ ဘလော့တှေ ဖတျခငျြလို့ရှိရငျ ဒီဟာလေးတှေ ကိုယျသုံးနတေဲ့ Web Browser တဈခုခုမှာ ထညျ့ပေးပါ။ အဲဒါလေးထညျ့လိုကျရုံနဲ့ ဇ...
အက်ဝင် နှင့် သချာင်္ - အက်ဝင် P1 စတက်တော့ သင်္ချာ ကျူရှင်မထားပါဘူး။ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ကလေးကို ကျူရှင်အတွက် အချိန် မကုန်စေချင်တာရယ် P1 သင်္ချာလောက်တော့ ကိုယ်လဲ သင်နိုင်တ ဆိုပြီးတော့ေ...
Myanmar needs International aid urgently. Please help! - Most of the country is flooded now due to incessant rain. Rescue efforts by authorities and local aid groups are struggling to reach flood-hit areas. Myanm...
စူးနွယ် ရဲ့ ကမ္ဘာ
ဒိုနောငျးမှာ တနတေ့ာ(ညနပေိုငျး) - ဒိုနောငျးမွဈကမျးက အိမျကလေး... ရှရေ့ကျတှကေ မိုးရှာထားလို့ မွဈရေ နောကျနတေယျ... သညျလိုရိုကျဖို့အတှကျ တောငျပျေါတကျခဲ့ရတာ။ အစက အဲသညျတောငျပျေါထိ စကျဘီးနဲ့သှားမ...
Internet Download Manager 6.19 - အင်တာနက် ဒေါင်းလုဒ် မန်နေဂျာ မတင်ပေးဖြစ်တာကြာပါပြီ .. အခုဟာကတော့ 6.19 ပါ .. ခုလောလောဆယ်မှာတော့ နောက်ဆုံး version လေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ .... သူ့ အထဲမှာပါတဲ့ ...
မာလာဟင်း - *ma la xiang guo* ပို့စ် မတင်တာ နှစ်နဲ့ချီပြီး ကြာသွားပါပြီး) မာလာဟင်း ချက်စားဖြစ်တာလေး တင်လိုက်ပါတယ် ချက်နည်း မရေးတော့ပါဘူးနော် ဟင်းအနှစ်ထုပ်နဲ့ ဟင်းသီး...
နံနက်စာနှင့် နေ့လည်စာများ - အားလုံးပဲ မင်္ဂလာပါရှင်။ ချက်စားတဲ့ ဟင်းလေးတွေ မတင်ဖြစ်တာလည်းကြာပြီး) မမိုးငွေ့က ဘလောဂ့်မှာ ဟင်းတွေတင်ပါကွယ်တဲ့း) ခုတင်လိုက်ပြီ။ ပျင်းလို့ချက်နည်းရေးတော့ဘူ...
Nyi Mu Yar
ကားနံပါတျတှေ အင်ျဂလိပျလို ပွောငျးလဲသတျမှတျပွီ - မွနျမာနိုငျငံက မျောတျောယာဉျ နံပါတျပွားတှကေို စာရငျးဇယားမှနျကနျရေး နဲ့ ကှနျပွူတာ ကငျမရာတှကေနေ မှတျတမျးတငျရလှယျကူစရေနျ ၂၀၁၃ ခုနှဈ ဂြူလိုငျလ ၁ ရကျနေ့ မှ စတင...
စိတ်အချဉ်ပေါက်ခြင်း - ရေးဖူးတဲ့ပို့စ် ဒီလိုလူကို မြင်လား? ခပ်တည်တည်ယူတင်ထားတဲ့ ပို့စ် ဒါက ဓာတ်ပုံကို ယူသုံးထားတယ် ဂူဂယ်မှာ ကြက်တောင်ပံဟု ရိုက်လျင် မြရွက်ဝေတင်ထားသော ဓာက်ပုံ ထွက...
၂.၉.၂၀၁၂ တနင်္ဂနွေနေ့ ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း - သာသနာတော်နှစ် ၂၅၅၆ ခု ကောဇာသက္ကရာဇ် ၁၃၇၄ခု ၀ါခေါင်လပြည့်ကျော် (၁)ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ၂.၉.၂၀၁၂ အရုဏ် မုန့်ဟင်းခါးဆွမ်း နှင့် နေ့ဆွမ်းလောင်းလှူခြင်း ကုသိုလ်ရှင် ...
Prosper & Peace
စိတ် - ကိုယ့်စိတ်အကြောင်းပဲ ကိုယ်ရေးချင်တာပါ။ တခါတလေ ပျော်လိုက် တခါတလေ ဝမ်းနည်းလိုက်နဲ့ ထိန်းရလည်း ခက်သလိုလို။ ကြိုးစားပြီး တရားမှတ် ဘုရားရှိခိုး ပုတီးစိတ် တာတွေ ...
- ငါးဖယ်ကြော် ငါးဖယ်ကြော် ကို စားရတာ ရိုးမသွားအောင် အစာပလာ အနည်းငယ်ထည့်ပြီး နည်းတစ်မျိုးနဲ့ ကြော်တာပါ။ ကျွန်မ အမျိုးသားက ငါးဖယ်ကြော်ပလိန်း၊ ငါးဖယ်ချက် ...
The World Sparrow Day - March 20 - The abase house sparrow has fans outside the rarefied world of birdwatchers. “It's because *successive generations arose up* with this passerine bird. It'...
Merry Merry Merry Christmas!!!! - သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်... အမြဲ ready to smile ဖြစ်နေတဲ့ မျက်နှာပိုင်ရှင်တွေက ပါးစပ်တဝိုက်မှာ အရေးအကြောင်းတွေ ထင်လွယ်တယ်တဲ့...။ ပြုံးကျင့် ရယ်ကျင့် နည်းတဲ့ ကိုယ...
ရွာပြင်ထုတ်ခံရသူများ - ငယ်ငယ်က ပုံပြင်တစ်ပုဒ်ကြားဖူးခဲ့တယ်။ ရွာထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတာတွေကို သူ့အမြင်အတိုင်းပြောလေ့ရှိတဲ့ အဘွားအိုကြီးတစ်ယောက် ရှိသတဲ့။ သူပြောတာတွေက ဒဲ့ဒိုးဆန်လွန်းတော့...
For “Harvest Thanksgiving Festival” - ချစ်မိတ်ဆွေများအားလုံးကို မင်္ဂလာပါလို့ နုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ ဒီလဟာ ဂျာမနီနိုင်ငံရဲ့ “harvest thanksgiving festival”လဖြစ်လို့ အားလုံးအတွက် အစားအသောက်ဝိုင်းလေးြ...
Salad အကြောင်းလေပေါမယ် - အရင်ပိုစ့်လေးက ဆလပ်အကြောင်းပါ Salad ၁ခု သုတ်တော့မယ်ဆို ၄မျိုးစဉ်းစားရပါမယ် ၁ က Base ပါ အခံ ဆလပ်ရွက် ၂ က Body ပါ အဓိက ပါဝင်ပစ္စည်းကိုဘာသုံးမလည်းဆိုတာပါ ၃ က Dre...
ကာရံဆူး ၏ စုံစီနဖာ အပိုင်းအစများ...
HAPPY BIRTHDAY!!!! - ဒီကနေ့ က သက်ဆိုင်သူကြီးရဲ့ မွေးနေ့ မင်္ဂလာ အခါသမယပါ...ပိတ်ရက် မဟုတ်လို့ သူလဲ ကိုယ့်ဆီမလာနိုင်သလို ကိုယ်လဲ သူ့ ဆီ မသွားနိုင်လေတော့...မွေးနေ့ ပွဲကို ခမ်းခမ်းနာ...
အကယ်လို့များ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ ပျက်မယ် ဆိုရင် - ကိုအောင်သာငယ်က tag လာပါတယ်။ အကယ်လို့များ ၂၀၁၂ မှာ ကမ္ဘာ ပျက်မယ်ဆိုရင်တဲ့။ ဘုရားဘုရား ဖွ ဟဲ့ လွဲပါစေ ဖယ်ပါစေ။ ထွီ ဖတ်ဖတ် ဖတ်၊ ဒူးမထိ ပေါင်မထိ၊ ဒူးမထိ ပေါင...
Smoke & Spice
လက်ဖက်ထမင်းသုပ် - ဒါကတော့ ရုတ်တရက် ဗိုက်ဆာပြီး ဟင်းချက်ချင်စိတ်မရှိရင်ဖြစ်ဖြစ် အလွယ်တကူသုပ်စားလို့ အဆင်ပြေလှပါတယ်။ လက်ဖက်အနည်း သာကျန်ပြီး စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်လဲ အသုံးဝင်လှပါတယ...
ပါဠိပါဌ်ဆင့်ရေးနည်းဖတ်နည်း - တရားစာအုပ်တွေ ဖတ်တော့ ပါဠိလိုတွေက ပါလာရော။ ပါလာတဲ့ ပါဠိပါဌ်ဆင့်တိုင်းကို မှန်အောင် အသံက မထွက်တတ်ပါဘူး။ ဒါနဲ့ သိမ်းထားတဲ့ အီးဘုတ်တွေပြန်ရှာတော့ ပါဠိပါဌ်ဆင...
ဘလော့ကို လာရောက်သူ အားလုံး မင်္ဂလာပါ အပေါင်းနှင့် ပြည့်စုံသော နေ့တနေ့ ဖြစ်ပါစေ။